MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement]
Myanmar IT Resource Forum » ADMINISTRATION BOARD » » Announcement » MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement]
1 MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 25th April 2010, 10:27 pm
အားလုံးစောငျ့မြှျောနကွေတဲ့ (မြှျောလားမမြှျောလားတော့ မသိဘူး) MITR 2.0 ရဲ့ ပွောငျးလဲမှု Plan လေးကို တဈဆငျ့ခငျြးလုပျသှားပါမယျ။
ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ ကွိုတငျမတ်ေတာရပျခံခငျြတာ တဈခုကတော့ အားလုံးရဲ့ ပူးပေါငျးပါဝငျမှုကို လိုခငျြပါတယျခငျဗြာ။
ပထမဆုံးအနနေဲ့ ကြှနျတျော ပွောငျးမယျ့ပုံစံအတှကျ လိုအပျမယျ့ဟာတှကေို Step by Step သှားကွပါမယျ။
အရငျကပွောခဲ့ဖူးသလို Forum ကို နှဈပိုငျးမခှဲတော့ပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ Category ကို အတတျနိုငျဆုံး နညျးနညျးဘဲထားပါမယျ။ (မြားလို့ရှိရငျ Cover မဖွဈလို့ပါ။ ရေးနိုငျတဲ့သူမြားလာမှ ထပျခြဲ့ပေးမယျလို့ စိတျကူးပါတယျ။)
အဲဒီ့လို Category ကို နညျးနညျးဘဲထားမယျလို့ ကြှနျတျော စဉျးစားမိတဲ့ အခါမှာ ပထမဆုံးတှရေ့တဲ့ အခကျအခဲကတော့ စာဖတျမယျ့သူက Post ရှာရတာပါ။
Post ကို ရှာတဲ့ အခါမှာ ကြှနျတျောတို့က Category ကို အစုံမခှဲပေးထားတော့ ရောနလေို့ ရှာရခကျပါမယျ။
အဲဒီ့ အတှကျ ဘယျလို အဆငျပွအေောငျ လုပျရမလဲဆိုတာကို ကြှနျတျော ၃ရကျလောကျ စမျးသပျပွီးတော့ ၊ အကောငျးဆုံးနဲ့ အလှယျကူဆုံး အဖွကေို စဉျးစားမိတာလေးကတော့ Post Title (သို့) Post Description လေးတှမှော Post Tag လေးတှေ ထားပေးခွငျးပါဘဲ။
Post Tag ထားတာ ဘယျလိုလဲဆိုတာကို သိခငျြရငျ အောကျက CSS Category ကို ကွညျ့ကွညျ့ပါ။
အဲဒီ့ Category နဲ့ အခြို့သော Category တှမှော ကြှနျတျော နညျးမြိုးစုံစမျးပွီးတော့မှ ဒီ Post ကို တငျတာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ့ Category မှာ လုပျထားသလိုမြိုး Post Tag တှကေို လုပျလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ Post ရှာမယျ့သူက အဲဒီ့ Tag လေးတှကေို ရှာလိုကျရုံပါဘဲ။
အဲဒီ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့မှာ ဘာအခကျအခဲရှိသှားပွနျသလဲဆိုတော့ အခု Forum ပျေါမှာ Topic 2000 ကြျောရှိပါတယျ။
Topic 2000 လုံးကို Post Tag လိုကျတပျပေးဖို့ဆိုတာ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
အဲဒီ့အတှကျ ကြှနျတျောလိုအပျနတော လူအငျအားဖွဈပါတယျ။ Member တှကေလညျး ကိုယျ့ Post လေးတှကေို Tag လေးတှေ လိုကျတပျခွငျးဖွငျ့ ကူညီပေးနိုငျသလို ၊ Moderator & Admin တှကေလညျး အားရငျအားသလို တပျပေးသှားဖို့ တောငျးဆိုပါတယျခငျဗြာ။
ဘယျလို Tag မြိုးတှေ တပျရမလဲဆိုတာကိုတော့ အောကျက Link မှာ ကြှနျတျော ခှဲပွပေးထားပါတယျ။
အကွမျးသဘောဘဲရှိလို့ မပွညျ့စုံသေးပါဘူး။ ထပျပွီးတော့လညျး အမွဲတမျးစဉျးစားမိတိုငျး ဖွညျ့ပေးနပေါတယျ။
အဈကိုတို့ရဲ့ အကွံပေးခကျြတှကေိုလညျး ကွိုဆိုနပေါတယျခငျဗြာ။
ဒီ အဆငျ့ပွီးမှ ကြှနျတျောလညျး ရှဆေ့ကျတကျလို့ရမှာပါ။
Category ကို ဘယျလိုပုံစံထားမယျ ၊ ဘယျလောကျ ခွုံ့နိုငျမယျဆိုတာ ဒီ အဆငျ့ပျေါမှာ မူတညျနပေါတယျ။
အဲဒီ့အတှကျ အားလုံးရဲ့ လုပျအားကို လိုခငျြပါတယျခငျဗြာ။
ဘာမှမခကျခဲပါဘူး ၊ တဈရကျကို ၅ ပိုဈ့လောကျဘဲ Edit လုပျပေးသှားရငျတောငျမှ Post 100 ရှိရငျ ရကျ ၂၀ ဆို ပွီးပွတျပါတယျ။ (Post 100 ရှိတဲ့ Member ကလညျး လကျခြိုးရလေို့ရတော့ ၊ အခွား Member တှကေ ရကျ အနညျးငယျနဲ့ ပွီးပွတျသှားမှာပါ)
အားလုံး ကူညီပေးကွပါခငျဗြာ။ တတျနိုငျသလောကျလေး လုပျပေးကွပါ။ Step 1 ပွီးရငျ Member တှေ အလုပျ Mod တှေ အလုပျ ကုနျပွီလို့ထငျပါတယျ။
အဲဒါသာပွီးရငျ ကြှနျတေျာ့ဘကျက ဆကျတိုကျ ဖွညျ့ပေးစရာဘဲကနျြပါတော့တယျ။
နားမလညျတာ ၊ အကွံပေးခငျြတာရှိရငျ လှတျလှတျလပျလပျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး အကွံပေးနိုငျပါတယျ။
Last edited by sHa92 on 26th August 2011, 10:50 pm; edited3times in total
2 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 25th April 2010, 11:40 pm
အဲအဲ............ Tag နဲ့ Category နဲ့ မတူပါဘူးနော်။
အဲဒီ့ Page မှာ Tag ရှိသလောက်ဘဲ Category ကိုခွဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ (အဲထက်တောင် နည်းနိုင်တယ်။ )
Category ခွဲတဲ့ အဆင့်က Step2မှာပါ။
အခု Tag ကိုဘဲ အရင်ဆုံးနိုင်သလောက် ပြုပြင်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ (အထူးသဖြင့် Topic Starter တွေပေါ့)
3 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 26th April 2010, 10:52 am
လုပ်ရမယ်ဟာလေးကို သေချာလေးရှင်းပြပေးပါလား ကျနော်က ကူညီချင်တယ်
နည်းနည်းပိန်းလို့ပါ ဥပမာလေးတခု နစ်ခုလောက်နဲ့ ရှင်းပြပေးပါလား
4 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 26th April 2010, 12:55 pm
ဒါဆို ပို့စ်တစ်ခုရဲ့ ခေါင်းစဉ် (title) ဘေးမှာ လိုက်ပြီး အမျိုးအစားရေးပေးရုံပဲပေ့ါ... ဟုတ်လား ??? Description မှာကော ရေးပေးရဦးမလား... ??? အရင်ဆုံးကတော့ $ƴǩǾ ပြောသလို ကိုယ့်ပို့စ်ကို ကိုပဲအရင်ဆုံးပြီးအောင်ရေးရမှာပေ့ါ... ဟုတ်တယ်ဆိုရင် အကိုတို့ စတော့မယ်လေ... လောလောဆယ် ငါ့ညီအဖြေကို စောင့်လိုက်ဦးမယ်...
5 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 26th April 2010, 1:01 pm
ဒါနဲ့ $ƴǩǾ အဲလိုတွေသာ လိုက်ပြီးရေးနေရင် စာလုံးအကြီးအသေးတွေက ပြဿနာတစ်ခုလိုဖြစ်လာဦးမယ်.... အဲဒိတော့ ငါ့ညီ အခုလောလောဆယ် ခေါင်းစဉ်တွေရဲ့ဘေးမှာ အရောင်တွေထည့်ရင်သုံးသလို အရံသင့်လေးတစ်ခုလောက်လုပ်ထားလို့ရလား... အကိုတော့နားမလည်လို့မသိဘူး... ရတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါလေးကို ရွေးပေးလိုက်ယုံပဲလေ... တစ်ခြားဘာမှ ထွေထွေထူးထူးလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့... အားလုံးလည်း တစ်ညီတစ်ညာတည်းဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်...
6 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 26th April 2010, 4:52 pm
shinthant wrote: ကိုဆိုက်ကိုရေ
ကျနော် အောက်မှာ ဥပမာပြထားပါတယ် ကို ရှင်းသန့် ရေ။
mars wrote: ဒါဆို ပို့စ်တစ်ခုရဲ့ ခေါင်းစဉ် (title) ဘေးမှာ လိုက်ပြီး အမျိုးအစားရေးပေးရုံပဲပေ့ါ... ဟုတ်လား ??? Description မှာကော ရေးပေးရဦးမလား... ??? အရင်ဆုံးကတော့ $ƴǩǾ ပြောသလို ကိုယ့်ပို့စ်ကို ကိုပဲအရင်ဆုံးပြီးအောင်ရေးရမှာပေ့ါ... ဟုတ်တယ်ဆိုရင် အကိုတို့ စတော့မယ်လေ... လောလောဆယ် ငါ့ညီအဖြေကို စောင့်လိုက်ဦးမယ်...
Description မှာ မရေးနဲ့ အစ်ကို ၊ အဲဒီ့မှာ ရေးထားတာကို Search လုပ်လို့မရဘူး။ ကျွန်တော် ၃ ရက်လောက်စမ်းထားပြီးမှ ပြောတာ။
Title ရဲ့ အနောက်မှာ လိုက် edit လုပ်သွားရုံဘဲ။
mars wrote: ဒါနဲ့ $ƴǩǾ အဲလိုတွေသာ လိုက်ပြီးရေးနေရင် စာလုံးအကြီးအသေးတွေက ပြဿနာတစ်ခုလိုဖြစ်လာဦးမယ်.... အဲဒိတော့ ငါ့ညီ အခုလောလောဆယ် ခေါင်းစဉ်တွေရဲ့ဘေးမှာ အရောင်တွေထည့်ရင်သုံးသလို အရံသင့်လေးတစ်ခုလောက်လုပ်ထားလို့ရလား... အကိုတော့နားမလည်လို့မသိဘူး... ရတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါလေးကို ရွေးပေးလိုက်ယုံပဲလေ... တစ်ခြားဘာမှ ထွေထွေထူးထူးလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့... အားလုံးလည်း တစ်ညီတစ်ညာတည်းဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်...
အကြီးအသေးက ပြဿနာတော့ သိပ်မဖြစ်ပါဘူး။ Search က case insensitive။
လှပြီး ညီညာစေချင်ရင်တော့ ကျွန်တော် Tag Page က အတိုင်းလုပ်ပေးပေါ့။
ကို မားစ်ပေးတဲ့ အကြံမဆိုးဘူးဗျ။
အဲလိုလုပ်လို့ရမလားမသိဘူး။ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ဦးမယ်။ ဒါပေမယ့် Manual အရင်လုပ်ထားပေးကြပါ။
ပြီးတော့ Member တွေ အနေနဲ့ အခုကတည်းက Post အသစ်တင်ရင် အဲဒီ့လိုတင်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
7 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 26th April 2010, 6:13 pm
Tag နဲ့ တကယ့် Topic Title နဲ့ကို Space ဘားလေးခြားပေးပါလား။
8 Tag Button Added [Announcement] on 26th April 2010, 11:19 pm
ကျနော့်ဘက်ကတော့ တစ်ခုပြီးတစ်ခု တာဝန်ကျေတယ်ဗျာ။ အစ်ကိုတို့ဘက်က လိုအပ်တာအားလုံးကိုလည်း လုပ်ပေးနိုင်ရင် လုပ်ပေးနိုင်သလောက် အတတ်နိုင်ဆုံး ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးနေပါတယ်။
အခုလည်း ကို mars အကြံပြုတာကို တစ်ညထဲ အပြီးလုပ်လိုက်ပြီ။
အခု Text Editor အောက်မှာ Button လေးတွေ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါလေးတွေ နှိပ်တာနဲ့ စာရိုက်စရာလည်း မလို space bar လုပ်စရာလည်း မလိုတော့ပါဘူး။
သူ့အလိုလို Tag လေးတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ (Member တွေလည်း Post တင်တဲ့ အခါ ကိုယ့်ပိုစ့်အမျိုးအစားအလိုက်။ နှိပ်ပြီးမှ တင်စေချင်တယ်ဗျာ။)
လောလောဆယ်တော့ အကြမ်းဖျင်း Tag လောက်ဘဲ ထည့်ပေးထားသေးတယ်။ အချိန်မရလို့။ နက်ဖြန်မှ သေချာပြင်ပေးမယ်။
ဒါပေမယ့် ကို mars ပြောသလို တကယ့် drop down လေးတော့ ရအောင် လုပ်ပေးမယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော်လည်း js မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် ဒီလောက်ဘဲလုပ်တတ်သေးတယ်။
အတိအကျကြီး မဟုတ်ပေမယ့် js concept ပေးသွားတဲ့ ကို max ကို လည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
9 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 27th April 2010, 8:03 pm
Member များ ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ အခု အသစ်ပြောင်းတဲ့ ပုံစံကို လိုက်နာပေးဖို့ အထူးမေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
အခု ကျနော်တို့က ရှေ့ကပြင် ၊ နောက်က တင်တဲ့ Post တွေက Tag တစ်ခုမှ ပါမလာတော့ အိတ်ပေါက် နဲ့ ဖားကောက် သလိုဖြစ်နေပါတယ်။
အားလုံးဘဲ Tag တပ်တာ ဘာမှ မပင်မပန်းဖြစ်အောင်လည်း (ကျွန်တော်က အပင်ပန်းခံ လုပ်ပေးထားပါတယ်)။
ခလုတ်လေးနှိပ်တာနဲ့ တင် အဆင်ပြေလို့ ၊ တစ်ချက်လောက် ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ။
ကိုယ့်ရဲ့ Post လေးတွေကိုလည်း အချိန်ရရင်ရသလို ပြင်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
ကိုယ်ပိုင် စဉ်းစားမိတဲ့ Tag လေးတွေရှိရင်လည်း ၊ ဒီနေရာမှာဘဲ အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ Tag အနည်းဆုံး ၃၀ လောက်တော့ လိုမှာပါ။ အခုက နည်းနည်းလေးနဲ့ General လောက်ဘဲ ရှိသေးလို့ပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောင်းလဲချက်ကို လိုက်နာပေးကြပါ ၊ ဖိုရမ် အတွက် အကြံပြုကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
10 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 27th April 2010, 9:14 pm
11 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 27th April 2010, 10:35 pm
ကဲ တော်တော်များများကို Dropdown List ထဲ ထည့်ထားလိုက်ပြီ။
အကြံပေးချင်တာ ၊ စိတ်ထဲပေါ်လာတာရှိရင် ပေးကြပါဦး။
ကျွန်တော်ထင်တယ် ဒိ Dropdown list လုပ်လိုက်တာက Button Click လုပ်ရတာလောက်တော့ မလွယ်လောက်တော့ဘူးနော့်။ နေရာစားတာတော့ သက်သာသွားတယ်ဗျ။
အားလုံးဘဲ ကျေးဇူးပြုပြီး အသုံးပြုပေးကြပါနော်။
12 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 28th April 2010, 8:16 pm
13 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 29th April 2010, 6:33 pm
လေ့လာသူအဆင့်မို့ တစ်ခါနှစ်ခါတော့ ခွင့်လွှတ်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အစ်ကိုလည်း ဒီ Topic မြင်ပြီးပြီဆိုတော့ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိပြီဆိုတော့ ၊ နောက်ကိုတော့ Tag မလုပ်ဘဲနဲ့ Topic တင်ရဘူးနော်။
14 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 30th April 2010, 8:40 pm
I can't access to that link, Admin. Help me...!!! [You must be registered and logged in to see this image.]
15 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 30th April 2010, 8:53 pm
အကိုရ ကျွန်တော်ကတော နဲနဲ ပိန်းတယ်နော် သုံးနည်းလေတွေတော နဲနဲပြောသင့်တယ်ထင်တယ်။ မသိလို့နော်။
16 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 30th April 2010, 9:05 pm
ပြော ပြ နေ တာ ပဲ ဟုတ် ၀ူး လား , ကို ၇ာ ဇာ မင်း ရဲ့..
17 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 30th April 2010, 9:05 pm
Cherry May wrote: Eh..
even Guest can access that page, sis.
what's wrong with you? Which error occur?
18 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 30th April 2010, 9:08 pm
yarzarmin wrote: အကိုရ ကျွန်တော်ကတော နဲနဲ ပိန်းတယ်နော် သုံးနည်းလေတွေတော နဲနဲပြောသင့်တယ်ထင်တယ်။ မသိလို့နော်။
how to teach you?
This topic is telling you how to do bro.
19 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 30th April 2010, 9:11 pm
အိုး ဟုတ် ပါ ၇ဲ့ ... ၇ တော့ ၇ တယ်
ဒါ ပေ မယ့်
စာ လုံး တွေ ကို ဖတ် လို့ ၇ ၀ူး ... ကယ် ကြ ပါ ဦး နော်
20 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 30th April 2010, 9:17 pm
why Font error?
I wrote it with Zawgyi-One.
What is your error, sister? Can you show the PrintScreen?
21 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 30th April 2010, 9:28 pm
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]I can't upload the picture..
22 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 30th April 2010, 9:32 pm
ahh, If so, how can I help you, sis.
At my side, that page is ok.
Last edited by SYKO on 9th May 2010, 7:40 pm; edited 1 time in total
23 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 8th May 2010, 11:08 pm
ကျွန်တော်အရင်ကပြောသလိုပဲလေ ဒီလိုလုပ်ရင် အားလုံး ပင်ပန်းတာပေါ့ တစ်ခုခုသာ ပြောင်းထားရင် Tag အတွက် Plugin သုံးလိုက်ရုံပဲ။ အခု သုံးထားတဲ့ forum အတွက်လဲ ရှိချင်ရှိမှာပေါ့ ရှာကြည့်ပြီးပြီလား...
24 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 9th May 2010, 7:41 pm
ဟင့်အင်းလေ။ အဲလိုတွေ မရှိဘူး။
အခု Select Box + js နည်းနည်းကိုလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထည့်ထားရတာ
Plugin လုပ်ချင်ရင်လည်း ကိုယ်တိုင်ရေးရမှာ။
ဒီနည်းကလည်း အရင်ကပိုစ့်တွေ အတွက်ဘဲ ပင်ပန်းမှာပါ ၊ နောက်ပိုင်း Post တွေတော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တာဘဲ။
25 [Game] on 1st June 2010, 3:06 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-06-01
I have read from NET GUIDE JOURNAL that DOTA all stars news can be read here.So,I want to read some blogs concerning with DOTA all stars and where can I read them?
26 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 2nd June 2010, 8:21 pm
"He told me that he is currently removed game section forawhile. That section will be included in the MITR 2.0"
27 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 4th June 2010, 4:41 pm
ဖတ်တော့ ဘာကိုတောင်ငြင်း နေကြပါလိမ့် [You must be registered and logged in to see this image.]
28 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 5th June 2010, 9:37 pm
ကို chan.virus ခင်ဗျာ..
29 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 15th June 2010, 2:32 pm
တညျနရော : ရန်ကုန်တိုင်း၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-06-15
ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှမသိဘူးနော်.....ဝေဖန်ရေးတော့လုပ်တတ်တယ်...အချိန်ရမှပဲပြန်ဖတ်ပြီး အကြံပေးတော့မယ်နော်...ဘိုင်... ဘိုင်
30 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 6th July 2010, 7:06 pm
When will this system begin?
Where is the Progess?
I can't wait anymore to see the new era of MITR...
31 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 18th July 2010, 1:58 am
အကိုရေ အကိုတို့ ဖိုရမ်လေး တွက် Step by Step သွားနေတဲ့ အဆင့်လေးထဲ့မှာ
ပါဝင်ခွင့် ရမယ် ဆိုရင်တော်တော် လေးပျော်မိမှာပဲ
ခက်တာ က ကျတော်က ကွန်ပျုတာ အကြောင်းကို နားမလည်သေးတော့ အကို ပြောတဲ့
အဆင့်တွေ ကိုတောင် မနည်းလိုက်ဖတ် နေရတယ် ဟီဟီ [You must be registered and logged in to see this image.]
ညီလေးပါ ပါဝင်ဖို့ ဒီဖိုရမ်မှာ ဇောက်ချ ရေးဖို့ စိတ်ကူးထားတယ် အကိုတို့ရေ
သဘောရော တုရဲ့လား မသိဘူး
အကိုတို့ ဆီ လာရင်တော့ ကောင်းကောင်းပြုစုရမယ်နော် ..................
32 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 18th July 2010, 11:33 pm
အနော်အကြံပေးချင်တာက အကိုတို့နေနဲ့ပေါ့ဗျာ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေကို ခွဲပေးထားပြီ ပိုစ်တင်မဲ့သူတွေကို အဲ့ဒီအောက်မှာတင်လို့ပြောတာက ပိုအစင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျာ.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေတစ်ခုခုလိုချင်တယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူရှာနိုင်သလို့ ပိုစ်တွေလဲမဖောင်းပွတော့ဘူးပေါ့...
အခုအပေါ်က font problem မျိုးဆိုရင် ဘယ် topic မှာ အကူအညီတောင်းဆိုတာမျိုးပေ့ါဗျာ
အနော့်အနေနဲ့ သိပ်မရင်းနှီးသေးပါဘူး အခုမှစလေ့လာနေတုန်းပါ၊
အနော်အနေနဲ့ အသေအချာလေးရှင်းပြထားရင် အကိုတို့ကိုကူညီကောင်းကူညီနီုင်ပါတယ်၊
33 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 19th July 2010, 10:13 am
Opera wrote: When will this system begin?
1-ကျွန်တော့် စာမေးပွဲပြီးရင် စပြီး ပြင်မှာပါ.
2-တိုးတက်မှုကတော့ ကျွန်တော့် ဦးနှောက်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ ပြီးတော့ ပြောင်းလဲလို့ရပြီဆိုတာနဲ့ တစ်ရက်အတွင်းပြောင်းမှာပါ။ စမ်းသပ်တာကတော့ တခြားနေရာမှာ စမ်းသတ်တာပါ။
3-Dead Line ကတော့ အားတာနဲ့ တစ်ပတ်အတွင်းပေါ့ဗျာ...
34 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 19th July 2010, 10:43 am
အကိုရေ ညီလည်း ပြန်လိုက်ပြင်ပေးလိုက်ပါ့မယ် ညီလေး တင်ခဲ့တဲ့ ပို့တွေ ကို
ဒီပို့လေးကို မမြင်လိုက်လို့ ပါ အကိုရေ
35 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 19th July 2010, 3:24 pm
ရပါတယ် အစ်ကို နေသစ်ဦး....
နောက်ပိုင်းတင်မယ့် Post တွေကိုတော့ သေချာတပ်ပြီးမှ တင်ပေးပါ ခင်ဗျာ...
အခုတစ်လော အစ်ကိုက Forum မှာ Active အဖြစ်ဆုံးဘဲနော်
နောက်လည်း ဒီလိုဘဲ Active ဖြစ်ဦး ထွက်မပြေးရဘူးနော်... =)
36 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 19th July 2010, 3:30 pm
$ƴǩǾ ရေ ကြိုးယူဦးမလား... တွေ့ပြီဆိုရင်ဖမ်းသာချုပ်ထား... မလွတ်စေနဲ့....
37 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 19th July 2010, 3:31 pm
လွတ်သွားတာ အတော်တောင် ကြာပြီ..
ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်လည်း လိုက်ဖမ်းနေတုန်းဘဲ
38 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 19th July 2010, 3:34 pm
အေး ဟုတ်သဟ... ကိုယ့်ဟာကိုပြောပြီး ကိုယ့်စကားနဲ့ကို ပြန်မိနေပြီ
39 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 28th July 2010, 5:10 pm
Forum ကို ညကျရင် Facebook နဲ့ ချိတ်ပါမယ်။
FB Connect နဲ့လည်း နောက်ကို Facebook ကနေ ၀င်လာလို့ရပါမယ်။
အခြား အသေးစားပြင်ဆင်မှုများလည်း ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ညကျရင်လည်း အချိန်ရရင် ရသလို ဆက်လုပ်ပေးထားပါမယ်။ Connection ကောင်းရင်ပေါ့။
FB Connect ချိတ်လိုက်ရင် Facebook Acc ရှိတဲ့သူတွေ အနေနဲ့လည်း သူငယ်ချင်းတွေကို ပိုမိုဖိတ်ခေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဖိတ်ပေးကြနော်။
Post Sharing ကလည်း ခုကတည်းက လုပ်လို့ရနေပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေလည်း Share ကြနော်။ Share ချင်တဲ့ ပိုစ့် အပေါ်မှာ "မျှဝေရန်" ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီး ကိုယ်မျှဝေချင်တဲ့နေ၇ာတွေကနေ မျှဝေလို့ရပါတယ်။
40 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 28th July 2010, 8:51 pm
Facebook Connect လည်း ပြီးသွားပြီ။ တခြား အသေးစားပြောင်းလဲမှုလေးတွေ စာရင်းကို ဒီမှာဘဲ ဆက်ပြီး ဖော်ပြပေးပါမယ်။
၁- Signature မှာ အရင်က စာလုံးရေ ၅၀၀ ဘဲရပါတယ်။ အခု ၁၀၀၀ အထိ တိုးမြှင့်ပေးထားပါတယ်။ (အခြားသူကို ပိုပြီး မျက်စိနှောက်လို့ရပြီပေါ့ )
၂- WYSIWYG editing ပုံစံမျိုး (Post တင်သလို ပုံစံမျိုး) နဲ့ signature ရဲ့ Editing ပုံစံကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်က BBCode တွေနဲ့ မမြင်မစမ်းအလှဆင်ခဲ့ကြရမှာ ၊ အခုဆိုရင် စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Signature နဲ့ ပတ်သက်လို့ပါ။
Signature ကို ဘယ်မှာထည့်ရမယ်မှန်းမသိတဲ့သူများ အောက်ကလင့်ခ်မှာ သွားထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
Facebook Like Button ကလည်း Facebook Connect ထည့်ရင်း တစ်ခါထဲထည့်ထားပါတယ်။ Post တစ်ခုစီရဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် Like Button လေးကို နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် Facebook ပေါ်မှာ သွားပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
Share Button ကိုလည်း မရှုပ်နေအောင် သတ်သတ် ခွဲထုတ်ပေးပါဦးမယ်။ ဒီအတိုင်းလဲ ရှဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
41 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 29th July 2010, 10:56 am
မနေ့ညကတည်းက လုပ်နေတာ ၊ Bug လည်း အတော်များများတွေ့ပြီး ၊ ရှင်းတော့ ရှင်းပေးထားတယ်။
Log in Page ကတော့ Box တွေ ပေါ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် server side က လူတွေက သူတို့ရှင်းပေးတာ စောင့်ဦးဆိုတာနဲ့ ၊ ပြန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။
တခြားတွေ့ရတဲ့ အဆင်မပြေတာတွေရှိရင် အသိပေးပါဦးနော်.... တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း ရှာထားတာဘဲ။
42 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 29th July 2010, 12:16 pm
Login time ကို နည်းနည်း ထပ်မြှင့်ပေးပါလား... စာတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြီး reply ပြန်ရင် login ပြန်ပြန်ဝင်နေရလို့ ...
43 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 29th July 2010, 12:35 pm
အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Service Provider ဘက်ကလုပ်ထားတာခင်ဗျ။
ကျွန်တော် ပြင်ဖို့ နည်းလမ်းရှာပေမယ့် မရဘူး။
ကိုယ့်ပိုစ့်ကရှည်မယ်ဆိုရင် Notepad ထဲ ရေးပြီးမှ ၊ Paste လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
44 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 6th August 2010, 6:52 pm
ကျနော် signature က HTML code တွေနှင့်ပေါ်နေတယ်ဗျ ... လုပ်ပါဦး.... profile>preference မှာ လဲ always allow HTML ကို NO ထားပါတယ်... ဘာလို့ပေါ်နေတာလဲ ဗျ...
45 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 6th August 2010, 7:43 pm
ကိုယ့်ကိုယ်ပြင်လည်းရလောက်ပါတယ်... delete လေးတွေလုပ်လိုက်ရုံဘဲရယ်။
46 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 7th August 2010, 8:18 pm
ညီ့ကို ဆက်သွယ်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ... ညီရဲ့ content မှာ....
Send email ကို click ရင် outlook express ရောက်သွားတယ်
via website ကို click ရင် website ရဲ့ Main Page ကိုရောက်သွားတယ်
47 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 30th September 2010, 10:30 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-11-28
အောက်က Topic ကလင့်တွေကို အကုန်လုံးနီးပါး မကောင်းတော့ဘူး...
(No such file or deleted )
ကျနော် အကြံပေးချင်တာကတော့ Ifile နဲ့မတင်ဘဲ တခြားဟာနဲ့ တင်စေချင်ပါတယ်
IFille က တစ်ပတ်အတွင်း ဒေါင်းမယ့်သူမရှိရင် ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်
ဥပမာ - Mediafire မှာဖြစ်ဖြစ် အကောင့်လုပ်ပြီးတင်ထားရင် ဘယ်အချိ်န်ဒေါ်င်းဒေါင်း မပျက်ပါဘူး...ကျနော့်ဟာတွေ တင်ထားတာ ခုထိရှိပါသေးတယ် ... ၇လ ၊ ၈လ လောက်ရှိနေပါပြီ ... ဒေါင်းလို့ ရနေပါသေးတယ်ဗျ
48 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 30th September 2010, 10:41 pm
water wrote: ညီ့ကို ဆက်သွယ်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ... ညီရဲ့ content မှာ....
အောက်ကပုံကို ကြည့်ပါ ... ရိုးရိုးလေးပါပဲ
49 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 11th April 2011, 8:37 am
Private Interracial Porn?????
admin ပုံကဘယ်လိုဖြစ်လို့ porn ပုံဖြစ်သွားတာလဲ
50 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement] on 12th April 2011, 11:29 am
wtf where????????? which photo did u mean?
51 Re: MITR 2.0 (Step By Step Building) [Announcement]